အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
၏ပထမဦးဆုံးတစ်ဝက်များအတွက် 2011, ငါမသီခငျြးမြားကိုပြု, အဘယ်သူမျှမ features တွေ, အဘယ်သူမျှမပြသ, ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး. ငါဝါရှင်တန်ဒီစီပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ယူ5တစ်ကြေးအလုပ်သင်များအတွက်ပယ်လအတွင်း. ငါညစဉ်ညတိုင်းကမ္ဘာပေါ်တွင်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်လူဦးပင်လယ်များ၏ရှေ့မှောက်၌ရပ်နေမခံခဲ့ရသော်လည်း, ငါ့၏အသကျအမြားဆုံးအသီးကိုသီးရာသီတ. ထိုအလုပ်သင်အဆုံးသတ်သောအခါငါသည်နောက်တဖန်ခရီးသွားလာစတင်ဖြည်းဖြည်းချင်းအသစ်ဂီတအပေါ်စတင်လုပ်ကိုင်. ခန့်ငါသည်ငါ့စတုတ္ထတစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်တွင်လုပ်ကိုင်အပြည့်အဝဂီယာသို့ကန်လဲကျ. ထိုအခက်ခဲအလုပ်၏လအကြာ, အယ်လ်ဘမ်တော်တော်လေးအများကြီးပြု.
ငါပင်ငါကလွှတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားထုတ်ဖော်ပြောဆိုမနိုင်. အစဉ်မပြတ်ငါကလူငါရှေ့တော်၌အပ်ပေးတော်မူပြီမဟုတ်တစ်ခုခုပေးဖို့ရှာဖွေနေတာပါ. ငါပြီးသားကိုဖန်ဆင်းပါတယ်အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုပြန်လည်အသက်သွင်းချင်ကြဘူး. ငါသည်သင်တို့ကိုသစ်ကိုအယ်လ်ဘမ်ပေးချင်, အသစ်ဂီတနှင့်အတူ, တူညီတဲ့အဟောင်းသမ္မာတရားကိုကျင်းပနေနှင့်နည်းလမ်းအသစ်များကို.
တွင် 2006 ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအယ်လ်ဘမ်အပေါ်, သူတို့ကသာလျှင်သိလိုလျှင်, ငါကသူတို့ကိုသိလိုသူတစ်ဦးဘုနျးကွီးသောဘုရားသခင်အကြောင်းလူတွေကိုပြောပြချင်ခဲ့တယ်. တွင် 2008, "20/20″ ထွက်. ငါကိုမှန်ကန်ရူပါရုံကိုနှင့်တကွသခင်ဘုရားကိုမြင်ရဖို့ဆိုတာဒီလူတွေကိုအားပေးချင်တယ်.2နှစ်ကြာပြီးနောက်, "နှစ်ဦး World ကြားမှာ” ကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်ငါကနေ့အကယ်ဖို့တစ်သူရဲကောင်းစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်ပြိုလဲကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျဘဝအသက်ရှင်ဖို့ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာ၏အာရုံဖြစ်စေချင်တယ်. ဒီနှစ်, ဧပြီလကစတင် 10, ငါက "ကောင်းမွန်သောဘဝအသက်တာကိုလေ့လာစူးစမ်းခြင်းနှင့်ပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ချင်တယ်။” ကမ္ဘာပေါ်တွင်သော်လည်း, ဇာတိပကတိ, နှင့်ကောင်းသောအသက်တာသည်အဘယ်သို့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုမာရ်နတ်သည်မုသား, အဲဒီမုသာစကားအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောခံရဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. ကျနော်တို့စက်ရုပ်ဖြစ်ရန်မလိုပါ. ကျနော်တို့ဘဝရှေးခယျြနိုငျ. ကျနော်တို့ကပြောသည်ခဲ့ဖူးတဲ့မုသာကိုစိန်ခေါ်ချင်, အသစ်တစ်ခုနှင့်ပိုပြီးဘုန်းပွင့်ပုံတစျပုံကိုတင်ပြ. Join me on the this journey.
Peteyboy82 • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:35 နံနက် • ပြန်ကြားချက်